Acoustic Foam, Ruzha Chipingamupinyi, Acoustic Diffuser - Vinco
Mazana evatengi vakagutsikana
Shenzhen Vinco Soundproofing zvigadzirwa Co, Ltd inozivikanwa mune yekudzivirira zvinhu zvemakore mazhinji uye inopa neR & D, kugadzirwa, kutengesa uye mushure mekutengesa sevhisi yezvigadzirwa.
Zvigadzirwa zveVinco zvinofukidza Chikamu cheBasa, sounproofing mapaneru, mafomu ekudzivirira inzwi, kudzivirira kurira kwemadziro, kudzivirira pasi pasi, kuvhara kwezwi padenga, pombi inodzivirira, macoustic mapaneru, kuputira acoustic, mapaneru ekurira kwezwi, zvigadzirwa zvekudzivirira, mafomu anotora ruzha uye nezvimwe.
Vinco anotarisa pasimba remuno achitarisa pasi, duo kune yakasimba hunyanzvi, hwakavimbika mhando uye kudhura kuita, zvigadzirwa zveVinco havd zvave kufarirwa kwazvo nevatengi.
Isu tine seti yakazara ye otomatiki makomputa anodzorwa michina uye nyanzvi hunyanzvi vashandi kuona chigadzirwa chedu mune yemhando yepamusoro. Yedu yekutengesa yegore inogona kusvika kumusoro mazana mashanu emamirimita emamirimita eRinodzivirira Zvinhu, Acoustic zvigadzirwa, zvinofamba zvinomira, Zvinoumbwa Nezvinhu. Welcome kushanyira fekitari yedu kuvaka refu mazwi bhizimisi pamwe ukama. Isu tichakupa yakanakisa sevhisi, hukuru mhando uye nemakwikwi mutengo.
• 2015 - Kuwedzera kwekugadzira chiyero, kutengesa pamwedzi kweanopfuura mazana maviri emazana emamita emamita eacoustic zvinhu
• 2012 - Iyo kambani ine gumi nemaviri eacoustic test ripoti.
• 2011 - Zvigadzirwa zveKambani zvinotengeswa pasi rese.
• 2009 - Akawana Certification yeSGS, CE, CMA, ilac-MRA, CNAS.
• 2007 - Kuvhurwa kweVinco Mhepo Inodzivirira Zvinhu fekitori muSenzhen uye kwakatanga kugadzirwa kukuru.
• 2003 - Yakagadzwa Shenzhen Vinco kambani yekudzivirira zvinhu.
Zvichienderera mberi nekuvandudza manejimendi danho kuti vatengi vazorodze.
Kunyatso kudzora zvinoenderana nematanho ekuona 100% inokodzera mwero wekutumira mhando.
√ SGS CE
Chiono:Kuve shamwari inovimbwa yevatengi vepasirese. Kuendesa yakanyanya kukosha kune vatengi, vashandi uye vagovani.
Basa: Kupa mhando yepamusoro, inokodzera uye inogutsa masevhisi ekugadzira acoustics epaneru uye musangano.
Zvigadzirwa zveVinco zvinofukidza Chikamu cheBasa, sounproofing mapaneru, mafoji ekudzivirira inzwi, kudzivirira ruzha, kuvharidzira pasi, kuvharidzira padenga, pombi inodzivirira, acoustic mapaneru, kuputira acoustic, mapaneru ekurira kwezwi, zvigadzirwa zvekudzivirira, mafomu anotora ruzha uye nezvimwe.
Inonzwika-inotora bhodhi yekufambisa kuchengetedza, kugadzirisa kwezuva nezuva uye nzira dzekuchenesa
Gumi mabhenefiti ezwi-rinotora bhodhi zvigadzirwa
(1) Isina mvura uye hunyoro-chiratidzo. Dambudziko rehuni zvigadzirwa ...
Ndeipi tekinoroji yekuvaka yebhodhi rinotora inzwi?
1. Ndeipi nzira yekuvaka yebhodhi rinotora inzwi? C ...
Nzira yekusiyanisa mhando yemapaneru-anotora mapaneru? Ingotarisa pazvinhu zvitanhatu
Hunhu hwemapaneru-anoteedzera anoteedzera kurira-ku ...
Ruzha Insulation Ruzivo
Nzira yekusarudza acoustic zvinhu? Uye iwo akasiyana mashandisiro
Zvitatu zvakajairika acoustic zvinhu Acoustic zvinhu (zvinonyanya kureva ...
Pakutanga gadziriro dzekumisikidzwa kwemapuranga anotora ruzha mapaneru
Izvi zvinotevera basa rekugadzirira kuiswa kwehuni ...
Nzira yekusarudza sei kuputira imba?
Nzira shanu dzinowirirana dzekudzivirira inzwi, idzo dzinoda kuchinjiswa ...
Maitiro ekugadzira indoor isina mutsindo madziro? Ndeupi rudzi rwemadziro asina mutsindo wakanaka?
Maitiro ekugadzira indoor isina mutsindo madziro? 1. Positioning yeiyo yakasununguka ...
Indoor use chii kurira kwekuvhara zvinhu mhedzisiro kwakanaka?
Kune akawanda emukati ekurira kwenzwi zvinhu, uye kune maal ...
Mapaneru anonaya-ruzha ane izvo zvakasiyana zvinhu zvakakosha
Rudzi rwekutanga ruzha-rwunotora-bhodhi-polyester fiber kurira ...